नयाँ दैनिक | ओलीको हात-खुट्टा गुमेपछि… ओलीको हात-खुट्टा गुमेपछि… – नयाँ दैनिक
ओलीको हात-खुट्टा गुमेपछि…
रुपाले रुँदै भनिन्– ‘भाग्यमा जे थियो, त्यही भयो ।’
पुस २४, काठमाडौँ । हामी नेपालीहरु भन्ने गर्छौँ–यस्तो त शत्रुलाई पनि नपरोस् ! पीडा के हो ? भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ । युवा उमेरमै हातखुट्टा गुमाउनुपर्दाको पीडा कस्तो हुन्छ ? कृष्ण ओलीलाई नै थाहा होला विचरा !
आफ्नी श्रीमतिलाई नर्स बनाउने सपना रहेछ रुकुमको सिम्लिका ओलीको । इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ पढ्दै रहेछन् । तर, उनको जीवनमा ठूलो बज्रपात पर्यो गत जेठ २५ गते । अघिल्लो दिनमात्रै उनीहरुको ‘म्यारिज एनिभर्सरी’ रहेछ । खुसी साटेको भोलिपल्टै जीवनमा आँधी आयो र उनको खुसी र सपना सर्लक्कै उडायो ।
दाङको तुल्सीपुरको विद्युत अफिसमा साईट सुपरभाईजरको रुपमा काम गर्थे ओली । घटनाको दिन आफ्ना अन्य सहयोगीको साथ उपभोक्तालाई विद्युत दिन पोलमा चढेका उनी एक्कासी भुईँमा पछारिए । ११ हजार भोल्टेजको करेन्टको झट्का लागेपछि उनको सास मात्रै गएन । साँझपख लाइन बन्द गरेर पोलमा चढेका बेला नजिकैका मिलवाला साहुले लाईन अन गरिदिएका रहेछन् थाहा नपाएर । ओलीले भने, ‘मैले काम गर्न जान लागेको सबैलाई थाहा थियो । मैले काम गरेकोभन्दा फ्युज डेढ किलोमिटर टाढा थियो । म यता आएर काम गर्न थालेँ, मिलवाला आएर आफ्नो पर्सनल कामको लागि फ्युज अन गरिदिएछ !’ उनले थप पीडा पोखे, ‘अघिपछि पनि यस्तो काम गथ्र्यौँ, त्यो दिन दशा रहेछ ।’
उनलाई तुरुन्तै स्थानिय अस्पताल लगियो । नेपालगञ्ज रिफर भए । त्यहाँ पनि उपचार हुन नसकेपछि थप उपचारको लागि भारतको लखनउमा पठाईयो । लखनउमा लामो उपचार गर्दा पनि अवस्थामा सुधार नभएपछि पुनः काठमाण्डौस्थित ग्राण्डी र किर्तिपुर अस्पतालमा लामो उपचारपछि उनलाई निको भयो । तर, बिडम्बना ! उनका दुवै हात र एउटा खुट्टा काट्नुपर्यो ।
कृष्णलाई निको त भयो तर उनका दुवै हात र एउटा खुट्टा छैन । अर्काको साहारामा बाँचेका तस्विर र भिडियो सार्वजनिक भएका छन् । उपचार गर्न नै ५० लाख बढी लागिसकेको र सबै ऋण काढेर खर्च गरेको उनकी श्रीमतिले जानकारी दिएकी छन् । नक्कली हातखुट्टा राख्न त्यति नै गरी करिब एक करोड खर्च लाग्ने उनीहरुको भनाई छ । त्यसैले उनीहरुले सार्वजनिक रुपमा आँसु पुछ्दै सहयोगको अपिल पनि गरेका छन् । कृष्णकी श्रीमती रुपाले रुँदै भनेकी छन्, ‘भाग्यमा जे लेखेको थियो, त्यही भयो ।’
कृष्ण बाबु झुपलाल र आमा जानकीका कान्छा छोरा हुन् । उनका एक दाजु छन् । तर, उनले सानोमा पनि माया पाएनन् । छोराको त्यो हालत भएपछि भेट्न जान्छु भन्दै घरबाट निस्केका बाबु बेखबर छन् । स्रोतका अनुसार कृष्णका दाइले केही रकम सहयोग गरेका थिए । आफूहरुको जग्गाजमिन पनि नभएको र ठूलो समस्यामा परेको भन्दै उनीहरुले दुखेसो पोखेका छन् ।
One thought on “ओलीको हात-खुट्टा गुमेपछि…”
SHIVA NEUPANE says: